ဖက်ရှင်အမြိုးသမီးမြားရဲ့ဂျာကင်အင်္ကျီဗုံးခွဲသူ - တစ်ဦး elongated, နွေး, သားရေ, အနက်ရောင်, အနီရောင်
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ဗုံးခွဲသူဂျာကင်အင်္ကျီ - အရှိဆုံးဖက်ရှင်မော်ဒယ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ဝတ်ဆင်နည်း
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ဗုံးခွဲသူဂျာကင်အင်္ကျီနဲ့တူ? ဦးဆောင်အမှတ်တံဆိပ်ကနေစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့် Non-စံမော်ဒယ်များတွေအများကြီးဖန်တီး စစ်တပ် မဆိုမသက်ဆိုင်အသက်အရွယ်နှင့်ကောင်၏အလှအပ, ကောင်းသောရူပခွင့်ပြုပါနှင့်အစဉ်မပြတ်လမ်းကြောင်းသစ်အတွက်ဖြစ်လတံ့သောစပျစ်သီးကို, ရန်။
ခေတ်ပြိုင်အမျိုးသမီးဆောင်းဦးဗုံးခွဲသူပင်အရှိဆုံးတောင်းဆိုမှုများဖက်ရှင်ကျေနပ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ လွင်ပြင်နိုင်လွန်သို့မဟုတ်သားရေများရိုးရာအင်္ကျီ, သဘာဝနှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးဒြပ်ထည်နှင့်ဂျင်း, နွေးခြင်းနှင့်အအေးနှစ်ခုလုံးကိုရာသီ၏ဖန်ဆင်းထုတ်ကုန်ပြုပြင်ထားသောဖက်ရှင် Avant-garde စတိုင်များနှင့်အတူ။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောအရှည်နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဗုံးကြဲလေဂျာကင်အင်္ကျီစစ်တပ်၏လူကြိုက်များဂန္မော်ဒယ်များအသစ်ပစ္စည်းများဖြစ်နေဆဲ - အချိုးမညီပြားချပ်ချပ်နှင့် cuffs မပါဘဲအမှုအရာအခမဲ့ဖြတ်၏အောက်ဆုံး drop ။
အဘယ်အရာကိုအရောင်များ, ပုံနှိပ်နှင့်ပုံစံမျိုးကမ်းလှမ်းမှုကို trendsetters ယခုရာသီ? မည်သို့ပင်စတိုင်၏, ထိုလမ်းကြောင်းသစ်အတွက်:
အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်; အဝါနုရောင်ရှိသောနှင့်အဝါရောင် pastel khaki,
မီးခိုးရောင်, အညိုရောင်, အနီ, အပြာ, အစိမ်း, ပန်းရောင်နှင့်အပြာရောင်အဆင်းအရောင်အားလုံးရိပ်;
ထွန်းလင်း, "ကိုရွှေ", "ငွေအ", သံမဏိနှင့်သတ္တု;
ဆဲလ်, ချွတ်, "အပြောက်အစက်", ပန်း, မတော်မတရားနှင့်စက်ရုံပုံစံများ, holography နှင့်ဆိုင်သောရည်ရွယ်ချက်များ;
ပန်းနှင့်ပန်းကပ်ပုံဖော်ခြင်း, ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများနှင့်တံဆိပ်များ, ဖဲကြိုး, သားမွေး, flounces နှင့်ခြားနား INSERT, rivets နှင့် rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
hot hits - အကြင်အရှည်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ပေါင်မှနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်နွားသငယ်ကိုမှကွဲပြားခြားနားသည်ရှည်မျောမျောအမျိုးသမီးဗုံးခွဲသူ, ရုံဒူးအထက် mod ဂျာကင်အင်္ကျီလက်လှမ်းမမီ။ ဒါကမော်ဒယ်ချောမွေ့ silhouette ဒါမှမဟုတ်ဖြည့်စွက်နှင့်အတူအခမဲ့ဖြေရှင်းချက်အောက်ခြေ string ကို, ရော်ဘာတီးဝိုင်းသို့မဟုတ်ရာဘာ cuffs ခြားနားလွန်းကျပ်မဟုတ်ရှိခြင်းတင်းကျပ်။ တူ၏အဆိုအရ cardigans ။ အချိုးမညီတစ်စက်အနားအရှည်, တောက်ပခြင်းနှင့်ရောင်စုံအကျီနှင့်အတူ takeoff အမျိုးသမီးတွေရှည်လျားဂျာကင်အင်္ကျီဗုံးခွဲသူတွင်တစ်ဦး laconic ပုံစံမျိုး, ဇစ်သို့မဟုတ်ခလုတ်နှင့်အတူ Demi နှင့်ဆောင်းရာသီထုတ်ကုန်ရာတေးသံ။
timeless ဂန္ - အမျိုးသမီးသားရေဗုံးခွဲသူဂျာကင်အင်္ကျီ - ၏ချစ်သူများအားလုံးကိုအခါသမယများအတွက်တစ်ဦးစွယ်စုံရွေးချယ်မှု ပြင်ပတွင်အဝတ်အစား ။ သဘာဝထုတ်ကုန်အများကြီးပိုစျေးကြီးအတုသားရေသူတို့ရဲ့များထက်ပေမယ့်, ဂုဏ်သရေရှိလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်တာရှည်ခံဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်အရာကိုတီထွင်မှု?
Neoclassical အဆိုပါအင်္ကျီလက်ပေါ်သေးငယ်တဲ့အိတ်ကပ်မှုပုံစံ, ဒါပေမဲ့အတွင်းဘက်နှင့်အတူလိုက်, ရင်သားအိတ်ကပ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ကြိမ်တည်းမှာအားလုံး။ အမြဲတစ်ဦး elastic တီးဝိုင်းနှင့်အတူအနည်းငယ်သာထပ်တူအတူစံအရှည်နှင့်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
Newfangled ဗုံးခွဲသူသားရေဂျာကင်အင်္ကျီတစ်ချောမွေ့အခမဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်း, တခါတရံတွင်အနိမ့်ခါးပတ် (ခြံဝင်းစတိုင်များရှေ့ပြေးဗုံးခွဲသူ) နှင့်သုံးလေးပုံတစ်ပုံစွပ်အိတ်ရှိပါတယ်။
အလှဆင်။ , လေဆာစက်နေမှုကိုချေဖျက် varnishing နှင့်အရေပြားအိုမင်း, တောက်ပ "ရွှေ" ဟာ့ဒ်ဝဲအများအပြားအရိပ်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင် blotches non-အပြုသဘောလေး, ဒေါင်လိုက်ရိုးရှင်းသောနှင့် ruffles ပေါင်းစပ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတိ, သတ္တု INSERT နှင့်လုံးခြားနား။
လေတိုက်ရာမှအမျိုးသမီးဗုံးခွဲသူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကာကွယ်မှုကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းနှင့်အအေး, လှုပ်ရှားမှုကန့်သတ်ရန်, နှင့်အကြီးအကျယ် podnadoevshy outerwear တစ်ဦးစတိုင်အခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်ပါဘူး။ elongated ဗားရှင်းရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌, ဒါပေမယ့်ချွတ်-ရာသီထဲမှာမသာသူတို့ကိုဝတ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုသည်, မိန်းမကိုဗုံးခွဲသူဂျာကင်အင်္ကျီ mod ကြီးမားတဲ့ကော်လာ-ပါးပျဉ်းသို့မဟုတ်သူမ၏ပခုံးကိုကျော်ထွက်ချထားအားလုံးထုတ်ကုန်များနှင့်လှပစွာတစ်ဦးအပိုဆောင်းအလှဆင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသော LIC, ရှိကြောင်းနွေးလိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့အမွေးသို့မဟုတ်ယူရို podstezhkoy တပ်ဆင်ထားကြသည်။
ခေတ်မှီတဦးတည်းအတွက်အသစ်အဆန်းနှစ်ခု - ဗုံးကြဲလေယာဉ်ပန်းခြံများနှင့်အနည်းငယ်တိုတောင်းရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလဖြေရှင်းချက် - avtoledi များအတွက် godsend ။ သီးသန့်, ဇိမ်ခံ, ပရီမီယံနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်-စျေးကွက်အဖြစ်မော်ဒယ်မသာသားရေနဲ့တရားစွဲ, နှင့်တာရှည်ခံနိုင်လွန်၏ လုပ်. , ချည်မျှင်နှင့်အထည်နှင့်ဂျင်းဘောင်းဘီတို့ကိုလည်းလုပ်လေ၏။ ကျော်ကြားတဲ့ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာသူတို့ရဲ့တေးသံထွက်အင်္ကျီများနှင့်အကျီဗုံးကြဲလေယာဉ်ရောင်စုံအမွေး INSERT နှင့်အလှဆင်, အခုတော့ဒီကြီးမားတဲ့ကော်လာနှင့်ကွဲပြားခြားနားတစုံတရာပေးအလှဆင်, cuffs ကျယ်ခါးပတ်အစားထိုးလိုက်ပါ။
ပျော့နှင့်ကြော့ကြည့်ရှုလေ့? ပန်း, holography သို့မဟုတ်မိုနိုခရုမ်နှင့်အတူတောက်ပြောင်နဲ့ဆိုရင်တော့ Matte အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူပန်းရောင်အမျိုးသမီးဗုံးခွဲသူ, - လိုအပ်သောကြောင်း။ သူမဆိုရွေးချယ်ထားသည့်ပုံတွင်ဣတ္နှင့်ယဉျကြေးမှု add မှတ်ချက်ပြုထားသည်။ အလွှာ flounces နှင့်အတူဂျာကင်အင်္ကျီ - အထူးစတိုင်, နေ့စဉ်နှင့်အားလပ်ရက်လေးအဘို့အညီအမျှသင့်လျော်သည်နှင့်ပန်းရောင်အတွက်အမျိုးသမီး insulator တွင်လည်းဂျာကင်အင်္ကျီ-ဗုံးခွဲသူဂျာကင်အင်္ကျီဆောင်းဦး-ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလရက်တက်အလှဆင်ရန်ရန်လွယ်ကူသည်။
အဆိုပါပန်းရောင်မော်ဒယ်များအပြင်, အပြာရောင်အကျီ, အဖြူအနီ, အပြာ, အဝါနုရောင်ရှိသောနှင့် milky အဖြူအရောင်နှင့်၎င်းတို့၏ပေါင်းစပ်အတွက်လူကြိုက်များ၏အထွတ်အထိပ်မှာ။ တစ်ဦးပုံစံမျိုးအဖြစ်အကြီးကြည့်ရှု:
တောက်ပနေနှင့် rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
အဆိုပါဂျင်းဘောင်းဘီ၏ကြီးစိုးအရောင်အပေါငျးတို့သအရိပ်၏အမျိုးသမီးအနက်ရောင်ဗုံးခွဲသူ - ခမ်းနားပုံစံများနှင့်ဂျင်း၏မိတ်ဆွေတို့ကိုများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်မှု။ Monophonic, ပုံစံများ, အစင်းများနှင့်ကျောက်စာနှင့်အတူကအလွန်လက်တွေ့ကျသည်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတို့သည်လည်းအပြည့်အဝဂျင်း "autfitov" မှတစ်ဦးစတိုင်များအပြင်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောပုံများ, ရှိနိုင်ပါသည်။ ကနေနောက်ကွယ်မှနှင့်မြင့်တက်ကျကြပါဘူး: ဗုံးကြဲလေယာဉ်များ, စစ်တပ်, ကတ္တီပါသို့မဟုတ်တရားစွဲခါးပတ်၏မူလပုံစံမျိုးနှင့်အတူ retro-စပျစ်သီးကိုဖြောင့်အပြာအကျီနှင့်မော်ဒယ်များ။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကန့်ခေါင်းဆောင်တဦး - အရောင်စောင်ဗုံးခွဲသူဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်အနက်ရောင်စိတ်ချလက်ချသစ်ကိုဆောင်းဦး-ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလရာသီသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ မတူကွဲပြားသောပစ္စည်းကို လုပ်. , သူတို့ပင်လေးလံနှင့်ရုပ်ပုံများကိုပိုမိုလွယ်ကူ, မကြော့နှင့်ဣတ္ကြည့်နွေး။ အဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ်ခုနှစ်တွင်:
အညိုရောင်အပြာ, အပြာ, အနီနှင့်အစိမ်းအရောင်နိုင်လွန်၏လွင်ပြင်များနှင့်ပုံနှိပ်ပုံစံများ;
သားမွေးနံရံနှင့်အတူနွေးထွေးသောစပျစ်သီးကိုဗုံးကြဲလေယာဉ်မိုးပြာရောင်; တောက်ပခြင်းနှင့်အရောင်ဖျော့ဖျော့ထုတ်ကုန်ကိုသဘာဝနဲ့ Eco သားရေဖောင်းကြွ။
စတိုင်အားကစား-chic - အလုပ်လုပ်တဲ့အမျိုးသမီးဗုံးခွဲသူ hoodies knitwear နှင့်ချည်မျှင်နှင့်အထည်။ အမျိုးသမီးအနီရောင်ဗုံးခွဲသူအင်္ကျီလက်နှင့်အတူဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်တစ်အင်္ကျီအပြာ, အပြာဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်တစ်ဦးဘေ့စ်ဘော-ရောနှောမော်ဒယ်စစ်တပ် - နှစ်ခု-သေံဘေ့စ်ဘောဂျာကင်အင်္ကျီအငြင်းပွားဖွယ်မရှိအကြိုက်ဆုံးတွေထဲမှာ။ အဆိုပါအားကစားထုတ်ကုန်နှင့်အတူယခုရာသီအတွက်သွားဖုံးနဲ့စိတ္တဇဂျီဩမေတြီပုံစံနှင့် "အပြောက်အစက်" ပုံစံနှင့်အတူမူရင်းဗုံးခွဲသူအကျီကငျးမဲ့ takeoff ကြီးကြပ်မှူးအရာတို့ကိုတာရှည်။ အဆိုပါပါးပျဉ်း, မြင့်မားသောအသံအတိုးအကျယ်နှင့်ဂန္ဖြစ်ချုပ်နှင့်လိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့နိုင်ပါတယ်။
သဘာဝအများနှင့်အတုတရားစွဲသားမွေးခြင်းမှနွေးအမျိုးသမီးဗုံးခွဲသူ - - သိုးအင်္ကျီမှတစ်ဦးကအကြီးအကအခြားရွေးချယ်စရာအစားအားလုံးအသက်အရွယ်၏အလှအပမှာ outerwear တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဒါဟာအညီအမျှလူငယ်များနှင့်တင်းကျပ်သောအမျိုးသမီးပုံရိပ်တွေသို့ဿုံကိုက်ညီနှင့်ဂျင်းဘောင်းဘီ, ဘောင်းဘီကွဲပြားခြားနား ensembles, ကြော့ဆင်မြန်းခြင်းနှင့်အဝတ်နှင့်အတူအဖြစ်နှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝတ်စုံ ။ လမ်းကြောင်းသစ်အရောင်များ: အညိုရောင်မီးခိုးရောင်ပြာနှင့် burgundy ။
ပြီးပြည့်စုံသောနှစ်သိမ့်မှုဦးစားပေး - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေများအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအမျိုးသမီးဗုံးခွဲသူဂျာကင်အင်္ကျီကိုရွေးချယ်ဖို့အခမဲ့ခံစားရသည်။ ကြောင့် Filler, fluff သို့မဟုတ် padding ကို polyester ၏အသုံးပြုမှုကိုရန်ဂျာကင်အင်္ကျီကိုဆင်းခေတ်သစ်အမျိုးသမီးဗုံးခွဲသူဂျာကင်အင်္ကျီနွေး, ဒါပေမယ့်လည်းအလင်းမသာဖြစ်ပါသည်။ ဖက်ရှင်အရှည်စံဂန္ထကနေနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်နွားသငယ်ကိုမှကွဲပြား, သင်ဘက်စုံသုံးအမှုအရာနှင့်တူလျှင်, တစ်ပါးပျဉ်းနှင့်အတူမော်ဒယ်ရှာဖွေပါ။ အခမဲ့ silhouette နှင့်အစိုင်အခဲမြင်ကွင်းပါးလွှာပုံဣတ္မခိုင်မြဲပုံကိုငါပေးမည်။
ကျနော်တို့ကလမ်းကြောင်းသစ်အရာဝယ်ယူပေမယ့်အမျိုးသမီးဗုံးခွဲသူဂျာကင်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီမဟုတ်လော ဖက်ရှင်ကျွမ်းကျင်သူအဝတ်အစားတွေက၎င်း၏စစ်တပ်နှင့်အားကစားမှေးမှိန်နေတဲ့စတိုင်ထို့အပြင်မြို့ပြ chic နှင့်သဟဇာတမှတ်စုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုသညျကား, ရဲရင့်ခြင်းနှင့်ဣတ္နှစ်ဦးစလုံး, ရင်ခုန်စရာပုံရိပ်တွေကိုဖန်တီးရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ အမြိုးသမီးမြားရဲ့ဗုံးခွဲသူဂျာကင်အင်္ကျီကွဲပြားခြားနား rvanok နှင့်ရည်းစားနှင့် capri မှဂျပိန်, ဂန္အခမဲ့ချောမွေ့ထံမှဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်အတူကောင်းစွာတတ်ခြင်းနှင့်ဘောင်းဘီနှင့် culottes, ဘောင်းဘီတို, အဝတ်, ဘောင်းဘီတို, အဝတ်, ဘောင်းဘီ, အဝတ်နှင့်ဆင်မြန်းကွဲပြားတော့တာပဲ။
အကျီနှင့်စဿုံမထိုက်မတန်အင်္ကျီဗုံးကြဲ ပေါ့ပေါ့ ဖိနပ် running ကြမ်းတမ်းနှင့်ကြော့ဖိနပ်နှင့်အတူပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်စမတ်-ပေါ့ပေါ့, Sneaker, အောက်စ်ဖို့, Lofer, sliponami နှင့်ချယ်လ်ဆီး, စီးပွားရေးဝတ်စုံအတွက်ဒေါက်နှင့်အတူဂန္ဖိနပ်များကလေးတို့သည်လည်းကိုက်ညီ။ ညနေပိုင်းတွင်လက်အောက်တွင်နှင့်ကော့တေး ensembles - ဘိနပ်မပါသောဒေါက်နှင့်အတူဖိနပ်, ခေတ်မှီပန့်များ, ဒဏ်ငွေဘွတ်ဖိနပ်မြင့်မား "gladiator" နှင့်ဂရိခြေနင်းသို့မဟုတ်။
အဆိုပါ offseason အတွက်ဦးထုပ်နှင့်လက်အိတ်ဇာထိုးပန်းထိုးသို့မဟုတ်ထိုးပြီး - မိန်းမတို့အဘို့ထုပ်များနှင့်ဦးထုပ်, သားရေဗုံးခွဲသူဂျာကင်အင်္ကျီ - သားရေလက်အိတ်;
ရှည်လျားသော scarves, scarves နှင့် shawls;
မည်သည့်အိတ်: ဘယ်လိုကိုက်ညီဖို့နဲ့ဆနျ့ကငျြဘ, "ဘီလူးကြီး" နှင့် "လူပု" အဓိကအရာ - ထိုစုစုပေါင်းရွေးချယ်ထားသည့်ကြက်သွန်နီစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ထူးခွားသညျ့၏သဟဇာတကစား။
ထိုးပြီးဆွယ်တာအင်္ကျီအမျိုးသမီးဗုံးခွဲသူဿုံဆင်မြန်းခြင်းနှင့်အဝတ်နှင့်အတူမတူကွဲပြားဣတ္လေးတို့သည်လည်းဖြည့်စွတ် Patterned ။ လက်ရာမြောက်သော - ယေဘုယျမတ်မတ်ထိုးပြီး။
အတူဂန္ထဝင်ဗုံးခွဲသူ-အကျီ အဝတ်, ဘောင်းဘီ , Maxi နှင့် mini စိမ်းလန်းစိုပြေခြင်းနှင့်ကျဉ်းမြောင်းသောအဝတ်။
lampsami နှင့်အတူဘောင်းဘီနှင့်အတူဗုံးကြဲလေယာဉ်ပုံနှိပ်ကွဲပြားခြားနားသောဘောင်းဘီတိုနှင့်အတူ Jersey ။
နောက်ဆုံးညှစ်သံမြည် - လမိုင်းလေး: တစ်အင်္ကျီကိုကျော်ဂျာကင်အင်္ကျီသို့မဟုတ်တိုင်းရင်းသားပုံစံများ, sequins နှင့် capris, culottes နှင့်ဂျပိန်ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်အတူပန်းနဲ့ကုတ်အင်္ကျီနှင့်တစ်ဦးစတိုင်သားရေဂျာကင်အင်္ကျီဗုံးခွဲသူ။
တစ်ပုံစံတွေနဲ့တင်းကျပ်စွာ - ကဖက်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်မ, ဝတ်ဆင်ရန်ဘာလဲ?
တစ်ဦးက hidden ပလက်ဖောင်းတစ်ဦးတည်းသောအပေါ် Casadei ဖိနပ်
ဖက်ရှင်အကျီနဲ့ Jackets 2014
အော်စကာ 2016 - အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆု
စီရော်နယ်ဒိုအမှတ်တံဆိပ် CR7 များအတွက်ရှင်းလင်းသောအလောင်းတော်ထားခဲ့ပါတယ်
ရော့ Kardashian က Black Chyna "၏မအောင်မြင်မိတ္တူ" ချိန်းတွေ့
ကုသခြင်းထက် - သူငယ်ကိုလည်ချောင်းနာခြင်းရှိသနည်း